Tsipalotra Ny Bolshevik Tany Fanavaozana - Tantara Ny Fianarana Toerana - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Tsipalotra Ny Bolshevik Tany Fanavaozana - Tantara Ny Fianarana Toerana
Tany fanavaozana ny tena zava-dehibe amin'ny Bolshevika
Fanohanana avy amin'ny tantsaha dia ilaina raha toa ka ny marefo tsipalotra ny bolshevik governemanta handeha ho tafavoaka velona - noho izany nahoana izy ireo no nanaiky fa izy ireo dia tanana ny fanaraha-maso ny tany ny tantsaha amin'ny endriky ny fanjakana iombonana toeram-piompianaNy Governemanta vonjy maika ho dia tsy hanao lahateny amin ny tany ny olana sy ny zavatra amin'ny Bolshevika nanolotra ny tantsaha, na dia tsy azo ekena tanteraka, dia tsara kokoa noho ny manana ny fidirana amin'ny tany izay mety ho ampiasaina. Ny tantsaha te-tany voazarazara ho eo an-tapitrisany kely holdings raha amin'ny Bolshevika mametraka ny finoany ao amin'ny iraisana toeram-piompiana niasa ny tantsaha amin'ny anaran'ny olona. Tamin'ny fotoana ny Revolisiona rosiana mihoatra ny ny an'i Rosia ny mponina teto an-tany. Ny fitaovana dia mbola moyen âge, ary tsy ho toy ny soavaly-nisintona ploughs dia ampiasaina matetika. Ny habetsaky ny vokatra vokarin'ny zara raha nitantara ny zavatra ilaina amin'ny fianakaviana mpamokatra izany any ambanivohitra aoka ihany mamokatra ny sakafo izay takian'ny ireo ao an-tanàn-dehibe. Voly tsy dia fahita, ary voalaza fa ny - n'ny tantsaha ao Rosia nonina eto ambany ny fiavotan-haavon'ny.
Izy tsy navela mba hanakarama mpiasa
Lenin fantany fa raha ny tsipalotra ny bolshevik Revolisiona handeha hahomby izy ilaina mba hanaovana zavatra maro. Handresy ny tantsaha amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny tany fa ny Governemanta vonjy maika dia efa tsy afaka manao. Raha ny tany dia tsy tsara natolotra ny tantsaha, ny tany fanovana natao fa ireo izay niasa tao amin ny tany araka ny tsipalotra ny bolshevik Revolisiona efa be kokoa ny torohevitra ho any amin'ny lalana izay tany dia farmed. Ny fanjakana iombonana toeram-piompiana dia mety tsy ho tonga lafatra fa ny tantsaha, fa izy no tsara kokoa noho izay efa nisy teo aloha.
Ataovy azo antoka fa ny mpiasa ao amin'ny tanàna efa ampy ny sakafo hohanina mba ho azo antoka fa ny orinasa dia mety ho foana miasa.
Lenin fantany fa tsy maintsy manolotra be ny zavatra maro samy ny mpiasa sy ny tantsaha raha ny tsipalotra ny bolshevik Revolisiona dia ny embed mihitsy ao Rosia. Tamin'ny novambra, amin'ny Bolshevika namoaka tany didim-panjakana, izay iray amin'ireo mihoatra ny didim-panjakana nivoaka tao amin'ny enim-bolana voalohany ny tsipalotra ny bolshevik governemanta ny fisiany. Io didim-panjakana voalaza fa: · Rehetra manokana ny tompon'ny tany dia ho nalain'ny ny governemanta amin'ny tsy nandoa onitra. Izany dia tafiditra monastic tany, tany tompony ny Romanovs, tany tompony ny andriana, tompon'ny tany amin'ireo minisitra ao amin'ny governemanta izay tsy andriana, tsy miankina pamokarana sy ny fiangonana tany. Rehetra amin ity tany ity dia"ho apetraka amin'ny fitantanana ny mpiasa izay mamboly azy ireo". Nogiazana tany natolotra ny tany komity sy ny distrika sovietika e. Nilaza izy ireo fa tany ihany no afaka ho niasa teo amin'ny olona izay niasa ara-batana eo fa ny tany. Tamin'ny taona olona tsy fantatra - angamba ny olona iray avy amin'ny niantsona fianakaviana - dia nanoratra hoe:"desambra: i Maria dia nahazo telegrama avy amin'ny Toetrany Faharoa. Izany dia mitovy tsy misy araka ny Toetrany Voalohany: ny tantsaha no nidina teo amin ny tany, ny biby fiompy, ny trano, sns. Nahazo taratasy avy amin'i Maria. Ny tantsaha tonga teo ny rainy miaraka amin'ny dika mitovy amin'ny didim-panjakana vaovao, izay milaza fa ny tany dia tsy maintsy indray ho voazarazara ho eo aminy, ary tena tamim-panajana nangataka azy mba zarao azy ho azy ireo, raha fantany fa tsy izy no manao izany tsara indrindra"ny zavatra Iray, fa ny tany fanavaozana no nisongadina dia ny tsy fitoviana izay hita eo anivon ny tantsaha eo amin'ny lafiny izay nahomby, ary izay tsy.
Ireo izay na inona na inona antony efa nahomby - ny fampitahana ny teny - dia ny hita amin'ny ankamaroan'ny tantsaha hafa toy ny hoe tsy tsara kokoa noho ny tompon'ny tany izay efa voampanga avo rents fa matetika mahantra tany.
Na 'Izvestia', ny tsipalotra ny bolshevik gazety, naneho hevitra mikasika ny andian-jiolahy ny mahantra tantsaha niditra an-keriny ny voa banky mahomby ny tantsaha sy ny fandraisana ny vary izay tiany.
Izany dia matetika nitondra ny ady, ary na dia ny fahafatesana. Izany dia, mazava ho azy, ny fiaraha-mientana ifampizarana tia eo amin'ny vondrona roa izay Stalin dia ny hilalao eo nandritra collectivization.
Rosia sy Amerika: Avy Fifandrafiana ny Fampihavanana